Dambiisha Warqadaha Cows, Dambiisha Waxyaabaha Furka, Dambiisha Waraaqaha - Changlin
Suufka dib loo isticmaali karo
Qaabka Kalluunka RPET 100% Qalabka Dib loo Isticmaalay ...
Daboolidda RPET Bag 100% Waxyaabaha dib loo rogay ...
Hannaan Waffle Bag RPET Bag samaynta Bag Natu ...
Eco Life Life Time Custom waara Washable Z ...
Bacda 'Tyvek Paper Bag' Waari kara dhaqo Meesha jiinyeer ...
Cananaaska Fabric Bag Bacda Wasakhda Free Cos dabiiciga ah ...
Dabiiciga ah Cotton Bag Casual cimri dherer Bag qabashada GR ...
Hayso qalab farsamo badan oo horumarsan
Koox khibrad u leh naqshadeynta iyo in ka badan 150 shaqaale xirfad leh
Laba khad oo wax soo saar oo waaweyn oo bishii qaadi kara 1 milyan oo jawaan
RPET Fabric (Recycled PET Fabric) waxaa sidoo kale loo yaqaannaa dharka cagaaran ee dhalada coke.
RPET Fabric (Recycled PET Fabric) waxaa sidoo kale loo yaqaannaa dharka cagaaran ee dhalada coke. Waa nooc cusub oo ah Cagaar cagaaran oo cagaaran oo ay soo saartay dib-u-warshadaynta dunta PET ee qaaliga ah. Kaarboonkeeda asalkiisu hooseeyo wuxuu abuuray fikrad cusub oo ku saabsan dib-u-cusbooneysiinta.Sida ku cad xaqiijinta tijaabada, waxay badbaadin kartaa ku dhowaad 80 ...
Shiinaha wuxuu ku dhawaaqay 'dagaal' wasakhda caaga
Shiinaha wuxuu ku dadaalayaa inuu yareeyo isticmaalka alaabada caaga ah ee aan la baabi'in karin iyadoo la cusbooneysiinayo qawaaniinta warshadaha balaastigga ah, 12 sano ka dib markii xayiraadihii ugu horreeyay lagu soo rogay bacaha balaastigga ah. Wacyiga bulshada ee wasakhda caaga ayaa si weyn kor ugu kacay sanadihii la soo dhaafay, iyo Chi ...
Hadda waa mid deg deg ah in la ilaaliyo deegaanka. Warshado badan iyo inbadan ayaa garwaaqsaday muhiimadda wareegga saaxiibtinimada iyo ku biirista RPET oo wax ku biiriya ilaalinta deegaanka ee dhulka.Rayada loo yaqaan 'CRET Fabric' (Recycled PET Fabric) waxaa sidoo kale loo yaqaannaa dharka coke dhalada coke,. ..
Bishii Agoosto, 2020, isgoyska weyn ee lugta ee Saldhigga Tareenka Waqooyiga Qingdao, dhowr dalladood oo qaas ah ayaa la saaray, kuwaas oo lagu daabacay astaamaha leh astaamaha Qingdao sida buufinta, bad-mareenka iyo dhismaha. Kuwii ugu yaabka badnaa waxay ahaayeen ereyadii “Waxaan ahaan jiray dhalo caag ah ...
Qalab farsamo oo heer sare ah
Waxyaabaha ilaalinta deegaanka
Gaaritaanka horumar waara
Bixi badeecadaha iyo adeegyada ugu fiican